Bata Lumbago Nemishonga Yezvakasikwa - Tsvaga Kuti Ungazviita Sei! | Bezzia
Bheja pamishonga yechisikigo yekurapa lumbago
Susana godoy | 24/04/2021 14:00 | Zvirwere
Bata lumbago haisi nguva dzose kugadzirisa nekukurumidza. Nekuti iwe unogara uchifanira kufunga kuti icho chirwere uye kana chave chakamisikidzwa sechisingaperi, chichava chiremba wedu ane izwi rekupedzisira. Asi kana iwe uchida kudzikisa marwadzo, iwe unogona kugara uchienda kunogadziriswa epanyama.
Iyo yepazasi musana inogona kutambura kubva kumatambudziko akasiyana. Pamwe, imwe mamiriro akashata, kubva pakubata huremu hwakawanda kupfuura hwataigona kana dzimwe nguva, nekuda kwekushushikana, pakati pevamwe. Ichokwadi ndechekuti kune vanhu vazhinji vanotambura nazvo uye vanoda runako rwekukurumidza zororo kuti vatangezve hupenyu hwavo. Tsvaga izvo zvakasikwa chaizvo!
1 Iyo chena willow ndeimwe yeakanakisa mubatsiri kurwisa lumbago
2 Deredza marwadzo ne ginger
3 Dhiyabhorosi claw tuber
4 Kupisa uye kutonhora kurapwa
Iyo chena willow ndeimwe yeakanakisa mubatsiri kurwisa lumbago
Kana iwe usingazive miriwo yakadai, zvinofanirwa kutaurwa izvo chena willow ndeimwe yemishonga yakanakisa yekurwisa marwadzo nekuti inorwisa-kuzvimba uye ichaita kuti nzvimbo izorodze uye kuti tinzwe kurerukirwa nekukurumidza. Neichi chikonzero, inoonekwa seyeyo sarudzo isingagone kusavapo. Asi kwete mukurwadziwa chete asi zvinonzi zvakare vanorwa zvese fivhiri uye dzihwa. Kuziva zvese izvi, imwe yedzakanakisa nzira dzekutora senge infusion. Saka isu tichawana zvakanakisa zvimiro zvacho. Maimuziva here?
Deredza marwadzo ne ginger
Icho chimwe chevatsigiri vakanakisa muhupenyu hwedu. Ehe, ginger inogara iri padivi pedu kutisiyira isu zvimwe zvakanaka. Pakati pavo vese, inozodzora kurwadziwa kwemhasuru. Sezvo ichionekwa seyakanyanya kuzorora uye nekudaro, inobatana kupokana nechirwere ichi chatinotaura nhasi. Kune nzira dzakawanda dzatinadzo kana tichishandisa mushonga wepanyama seizvi, asi zvakanakisa kukwiza nzvimbo inorwadza nemadonhwe mashanu emafuta akakosha. Kune yatinozowedzerawo mamwe akawanda mamwe mafuta aunoda, iwe unenge uine mubatanidzwa wakakwana kuzorodza nzvimbo. Ichokwadi kuti mune iyi nyaya tinogona zvakare kuita zvinotevera: Bika zvidimbu zviviri zvejiniga muhafu yetita yemvura. Unogona kuzvimomesa nekumwa, kana uchida. Ehezve, chero bedzi usina imwe hosha inoratidza zvimwe. Sezvo zvisina kuratidzwa kana iwe ukatora vatete veropa, matambudziko emoyo kana chirwere cheshuga.
Dhiyabhorosi claw tuber
Hongu, inogona kunge isinganzwike zvakanyanya senge yapfuura, asi zvakare imwe yeanodzora marwadzo ayo anonyanya kukurudzirwa kurapa marwadzo ekudzokera kumashure. Nechikonzero ichocho chaizvo, nekuti inokwanisa kutipa chiito chinozorodza, chinozorodza nzvimbo yese. Asi ichokwadi kuti mune ino kesi, yakakwana kune izvo zvirwere zvatave tichikweva kwazviri kwenguva yakareba. Kana iwe usingazive, inowanzo kuwanikwa mune capsule fomu, izvo zvichave nyore kutora. Sezvatiri kutaura, mhedzisiro yaro haizove yekukurumidza, asi mukufamba kwenguva iwe uchaona kuti inoshanda chaizvo.
Kupisa uye kutonhora kurapwa
Kunze kwezvirimwa kana tubers, ichokwadi kuti kune imwewo mishonga yekumba iyo inonyanya kushandiswa kurapa kurwadziwa kwepashure. Mune ino kesi inyaya yekuchinjana kutonhora uye kupisa munzvimbo. Zvinokurudzirwa kushandisa chando mukati mezuva rekutanga kana rechipiri iro rinotanga kukuvadza. Ehe, yeuka kuti hatife takaisa chando paganda zvakananga, asi kuburikidza nemucheka. Mushure memazuva maviri muchishandisa kutonhora, inguva yekupisa. Mabhodhoro emvura anopisa kana gumbeze remagetsi zvinogona kutibatsira. Iyo ndiyo nzira yakanakisa yekuzorodza nzvimbo, kuzorodza mhasuru dzako uye kutaura zvakanaka kwekusagadzikana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Utano » Zvirwere » Bheja pamishonga yechisikigo yekurapa lumbago
Unofamba? Matipi gumi ekuti kufamba kwako kuve nyore
Kudzorerazve zvinhu zvakasikwa: Sei zvichikosha?